Shidane Cismaan | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha
About the Author Shidane Cismaan
Waa abwaan iyo qoraa ka tirsan Afrikaan. Qoraaga wuxuu cilmi gaar leh u leeyahay Maamulka iyo Maareynta. Qoraaga wuxuu wax ka qoraa wadaniyada, qabyaaladda, arrimaha madadaaladda iyo waliba cilmiga maamulka iyo maareynta. Abwaanka wuxuu ku magac dheeryahay qabyaalad-diid.
Waa maanso cajiib ah, waxayna ku saabsantahay doorashada ka socoto Soomaaliya sanadkaan 2017. Maansadaan ayaa ka turjubanayso hab-dhaqanka cusub ee siyaasadda Soomaaliya. Soomaali horey ayaa waxay u tiri “hadal badan haan ma buuxsho” ee adiga maskaxdaada iyo maankaada kaga boggo. Ragaan kala didaayee xilalka doonaaya Ragaan dabajooga gaalkee ayaku aan wax doonaan karin Ragaan daacadnimadiyo ka tagay diintii illaahay Qalbiyada ragaan ka daxalaystayee diirnaxa lahayn Balanqaadyada ragaan noo daldalay aan dibnaha dhaafin Kuwii shalay nadagayee qaraxa noodaadshay Ee hablihii beec nooga daabulee dibada iibgeeyey Ee boogtaan dawee lahaa iyo nabara duugoobay; dib inoogu soo fagey qabiil gunimo noo dooray Ee …